Budata USB Safeguard maka Windows
Budata USB Safeguard
Free Budata maka Windows (0.53 MB)
Budata USB Safeguard,
Nchekwa USB, nke na -echekwa ma na -echekwa data nkeonwe gị na ebe nchekwa USB gị, pere mpe na obere mkpagharị, yana nefu.
Mgbe ị depụtasịrị ma tinye ngwanrọ Nchebe USB na ebe nchekwa gị, ị debere onwe gị paswọọdụ. Ịnweta faịlụ ndị ị ga -ezoro ezo ma emechaa nwere ike jiri paswọọdụ a. Ngwanrọ a, nke na -echekwa faịlụ nụdị ezoro ezo, na -eme ka akwụkwọ ahụ ghara ịdị na -ele anya nechiche niile. Mgbe ịchọrọ imepe faịlụ ezoro ezo, ọ ga -ezuru itinye paswọọdụ gị. Noge usoro okike okwuntughe, Nchebe USB na -echekwa paswọọdụ gị nakwụkwọ ederede wee chekwaa ya na faịlụ nke masịrị gị ka ị nwee ike icheta okwuntughe gị. Maka na ịkwesịrị icheta okwuntughe i setịpụrụ. Ma ọ bụghị ya, ị gaghị enwe ike ịnweta dọkụmentị gị. Nchebe USB abụghị naanị izo ya ezo ma chekwaa data, kamakwa ọ na -enye gị ohere ịchọgharị Internet Explorer na ọnọdụ nchekwa. abanye na ibe,Enwere ike ịchekwa nkọwa dịka aha njirimara na okwuntughe site na ihe nchọgharị nke kọmpụta ọha, ọkachasị ụlọ ịntanetị. Site na njirimara ọnọdụ nchekwa, nke dị mkpa maka azụmahịa zoro ezo, a naghị edekọ saịtị na okwuntughe ị tinyere na ịntanetị. Nikwu ya nụzọ ọzọ, ị nwere ike banye na saịtị ịchọrọ na -ahapụghị akara wee chebe aha njirimara na paswọọdụ gị.
Mgbe ịmechara Nchekwa USB, ị nwere ike ịchọgharị na Ịntanetị na ọnọdụ nchekwa site na ịpị akara ngosi Internet Explorer site na mmemme mmemme ahụ. Enwere ike ịchekwa saịtị, kuki, aha njirimara na okwuntughe i tinyere na nchekwa Nchọgharị Nchekwa na ebe nchekwa USB gị, ma ọ bụ enwere ike ihichapụ ya na -enweghị mgbanwe, dabere na nhọrọ gị. Nchebe USB pere mpe na nke efu bụ ngwa bara uru ị nwere ike iburu wee chedo data nkeonwe gị ngwa ngwa. Dị mkpa! Ihe omume a na -arụ ọrụ naanị na eriri USB. Ọ naghị arụ ọrụ dị ka ngwanrọ desktọọpụ. Ọ na -akwado sistemụ faịlụ FAT16, FAT32 na NTFS.
USB Safeguard Ụdịdị
Nha faịlụ: 0.53 MB
Mmepụta: USB Safeguard Soft.